यो गोपनीयता कथन अन्तिम पटक ०//२28/२०१२ मा अद्यावधिक गरिएको थियो र युरोपियन आर्थिक क्षेत्रका नागरिक र कानुनी स्थायी बासिन्दालाई लागु हुन्छ।
यस गोपनीयता कथनमा हामी तपाइँको मार्फत हामीले प्राप्त गर्ने डेटाको साथ हामी के गर्छौं भनेर वर्णन गर्दछौं https://comme-un-pro.fr। हामी तपाईंलाई सिफारिस गर्दछौं कि तपाईले यस भनाइलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्। हाम्रो प्रकृयामा, हामी गोपनीयता कानूनको आवश्यकताहरूको पालना गर्दछौं। यसको मतलब हो, अन्य चीजहरूको बीचमा, त्योः
हामी स्पष्ट रूपमा उद्देश्यहरू इंगित गर्दछौं जसका लागि हामी व्यक्तिगत डेटा प्रक्रिया गर्दछौं। हामी यो गोपनीयता कथन को माध्यम बाट यो गर्छौं;
हाम्रो उद्देश्य हाम्रो व्यक्तिगत डेटाको संग्रहलाई वैध उद्देश्यहरूको लागि आवश्यक व्यक्तिगत डेटामा मात्र सीमित गर्ने;
हामी पहिले तपाईंको सहमतिको लागि तपाईंको व्यक्तिगत डाटालाई प्रक्रिया गर्न तपाईंको स्पष्ट सहमतिको लागि सोध्छौं;
हामी तपाईंको व्यक्तिगत डाटा सुरक्षित गर्न उचित सुरक्षा उपायहरू लिन्छौं, र हामीलाई हाम्रो लागि व्यक्तिगत डाटा प्रोसेसिंग गर्ने पार्टीहरूको समान आवश्यक छ;
यदि तपाईले अनुरोध गर्नुभयो भने हामी तपाईको व्यक्तिगत डेटा हेर्न, सहि वा मेटाउने अधिकारको सम्मान गर्दछौं।
यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् वा हामी जान्न चाहन्छौं कि हामी के डाटा राख्छौं, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
१. उद्देश्य, डाटा र अवधारण अवधि
१.१ वेबसाइटको सुधारका लागि तथ्या .्कहरू संकलन र विश्लेषण गर्नुहोस्।
यस उद्देश्यका लागि, हामी निम्न डेटा प्रयोग गर्दछौं:
यसको आधारमा हामी यो डेटा प्रक्रिया गर्न सक्दछौं:
सहमति प्राप्त भयो
हामी सेवाको अन्त्य सम्म यो डाटा राख्छौं।
१.२ निजीकृत उत्पादनहरू र सेवाहरू प्रस्ताव गर्न सक्षम हुन
२. अन्य पार्टीहरूसँग साझेदारी गर्दै
हामी केवल यो डाटा प्रोसेसरहरू र अन्य तेस्रो पक्षहरूसँग साझेदारी गर्छौं जसका लागि डाटा विषयहरूको सहमति प्राप्त गर्नुपर्दछ। यसले निम्न भाग (हरू) लाई चिन्ता गर्दछ:
उद्देश्य: व्यापार साझेदारी
डाटा: नेभिगेसन र पार्टनर साइटहरूमा कार्यहरूसँग सम्बन्धित जानकारी।
हाम्रो वेबसाइटले कुकीहरू प्रयोग गर्दछ। कुकिजमा अधिक जानकारीको लागि, कृपया हाम्रो सन्दर्भ गर्नुहोस् कुकीज नीति.
Stat. तथ्या .्क
हामी अज्ञात तथ्या .्कहरूको ट्र्याक राख्छौं कसरी आगन्तुकहरूले हाम्रो वेबसाइटको प्रयोग र कसरी प्राय: र कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने बारे एक विचार प्राप्त गर्न। पूर्ण आईपी ठेगानाहरूको समावेशीकरणले हामीलाई रोकेको छ।
हामी व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा को लागी प्रतिबद्ध छौं। हामी दुरुपयोग र व्यक्तिगत डेटामा अनाधिकृत पहुँच सीमित गर्न उचित सुरक्षा उपायहरू लिन्छौं। यसले सुनिश्चित गर्दछ कि केवल आवश्यक व्यक्तिहरूले मात्र तपाईंको डाटामा पहुँच गर्न सक्दछन्, डाटामा पहुँच सुरक्षित छ र हाम्रो सुरक्षा उपायहरू नियमित समीक्षा गरिन्छ।
Third. तेस्रो पक्ष वेबसाइटहरू
यो गोपनीयता कथन हाम्रो वेबसाइटमा लिंकहरू द्वारा जडित तेस्रो पक्ष वेबसाइटहरूमा लागू हुँदैन। हामी ग्यारेन्टी दिन सक्दैनौं कि यी तेस्रो पक्षहरू तपाईंको व्यक्तिगत डाटालाई विश्वसनीय वा सुरक्षित ढ secure्गले ह्यान्डल गर्छन्। हामी सुझाव दिन्छौं कि प्रयोग गर्न अघि तपाईंले यी वेबसाइटहरूको गोपनीयता कथनहरू पढ्नुहोस्।
This. यस गोपनीयता कथनमा परिवर्तनहरू
हामीसँग यस गोपनीयता कथनलाई परिमार्जन गर्ने अधिकार आरक्षित छ। कुनै पनि सम्भावित परिवर्तनहरूको बारेमा सचेत हुनका लागि तपाईले यो गोपनीयता कथन नियमित रूपमा परामर्श लिनु पर्छ। थप रूपमा, हामी सक्रिय रूपमा तपाईंलाई सूचित गर्न सक्दछौं जब सम्भव हुन्छ।
Access. तपाईको डेटा पहुँच र परिमार्जन गर्नुहोस्
यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् वा जान्न चाहनुहुन्छ कि हामीसँग तपाईंको व्यक्तिगत डेटा कस्तो छ, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईं तलको जानकारी प्रयोग गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग निम्न अधिकारहरू छन्:
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं जहिले पनि यो स्पष्ट पार्नुहुन्छ कि तपाईं को हुनुहुन्छ, ताकि हामी निश्चित हुन सक्छौं कि हामी गलत व्यक्तिको डाटा परिवर्तन गरिरहेका छैनौं वा मेटाउँदै छौं।
A। उजुरी गर्नुहोस्
यदि तपाइँ तपाइँको व्यक्तिगत डेटाको प्रशोधन (प्रोसेसिंग) को प्रक्रियाको तरिकाबाट हामी सन्तुष्ट छैनौं भने तपाईसँग डेटा संरक्षण प्राधिकरणसँग गुनासो गर्ने अधिकार छ।
१०. डाटा संरक्षण अधिकारी
हाम्रो डाटा संरक्षण अधिकारी ईयू सदस्य राज्यमा डाटा संरक्षण प्राधिकरणको साथ दर्ता गरिएको छ। यदि तपाईंसँग यस गोपनीयता कथन वा डाटा संरक्षण अधिकारीको लागि कुनै प्रश्न वा अनुरोधहरू छन् भने, तपाईं Tranquillus, वा tranquillus.france@comme-un-pro.fr मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।